လိင်ကိစ္စအပြီးမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ကိစ္စ ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
အတွဲတော်တော်များများဟာ ကိစ္စပြီးတာနဲ့ ဟိုဘက်လှည့် အိပ်ကြတာ များမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မပါပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံ ပြီးပြီးချင်း အချိန်လေးဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သံယောဇဉ်ရစ်နှောင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ သင်က သူမကို ထွေးပွေ့ပြီး အိပ်ဖို့ကလွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်တတ်ရင် လိင်ဆက်ဆံပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ကိစ္စ ၁၀ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လိင်ကိစ္စအပြီးမှာ သင်ဟာ ဗိုက်ဆာနေလောက်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလိုမျိုး ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အမြန်စားလို့ရတဲ့ဟာ တစ်ခုခုလုပ်ပြီး အိပ်ယာထဲမှာ ၂ ယောက်သား ထွေးပွေ့ရင်းနဲ့ စားလိုက်ပါ။
ကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်မှာ စကားပြောခြင်းဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ပို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ အဲဒိချိန်မှာ စိတ်ကြည်နေတဲ့အတွက် အရေးကြီးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းပါတယ်။ အရမ်းကြီးတော့ Serious မဖြစ်ပါနဲ့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပြောဆိုပါ။
၃. တူတူ အမှတ်တရ ပုံလေးတွေရိုက်ပါ
ပျော်ရွှင်မှုရပြီးနောက်မှာ သင်တို့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ရိုက်ကြည့်ပါ။ သင်တို့မှာ သဘာဝပျော်ရွှင်မှုကနေ မျက်နှာ လင်းနေမှာမို့ မိတ်ကပ်တောင် မလိုပါဘူး။
လိင်ကိစ္စအပြီးမှာ အိပ်ပျော်သွားတတ်တဲ့ ပျင်းစရာစုံတွဲ မလုပ်ပါနဲ့တော့။ ကိစ္စအပြီး အိပ်ရာထဲမှာ ခဏလောက် ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေတာဟာ ရိုမန်တစ် ဆန်လွန်းပါတယ်။ TV ကြည့်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် စကားပြောရင်းဖြစ်ဖြစ် မထိတထိလေး ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေတာဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါကတော့ ပြောဖို့တောင်လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ကိစ္စပြီးရင် ဖက်ပြီး ထွေးပွေ့ထားပေးခြင်းဟာ သင့်ပါတနာကို သင်ဘယ်လောက် မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ ပြရာလဲရောက်ပါတယ်။ လူတိုင်းလဲ ကြိုက်ပါတယ်။
စိတ်ချင်းဆက်သွယ်ဖို့ နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဖက်ထားပေးတာ၊ အစာခွံကျွေးတာ၊ စကားပြောတာတို့ပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင်လှဲပြီး ဘာမှ မပြောပဲ မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်နေရတာကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ချစ်စရာ စကားလေးတွေလဲ ပြောပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ရယ်ရတာကို မကြိုက်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ကောင်လေးတွေက ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကြိုက်တတ်တာ သက်သေပါ။ ကိစ္စအပြီးမှာ ရယ်စရာ ပြောပေးပြီး အားရပါးရ ရယ်လိုက်ပါ။ ရယ်ခြင်းဟာ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်မှုကိုလဲ မြင့်မားစေပါတယ်။
၈. အနာဂါတ်ကို ဆွေးနွေးပါ
ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်အိပ်မက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေကို သူမကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင်သွားချင်တဲ့ နေရာတစ်ခု၊ လုပ်လိုတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့။ အဲဒါဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုသိစေပြီး ဆက်သွယ်မှု ပိုခိုင်မြဲစေပါတယ်။
၉. ဇာတ်ကား တစ်ကားလောက် ကြည့်ပါ
ချစ်ကိစ္စပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ရိုမန်တစ်ဆန်ပါတယ်။ အလွမ်းအဆွေးကားတွေရှောင်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသကားလေးတွေ ကြည့်ပါ။ အဲဒါဟာ သင်တို့ကြားက ဆက်သွယ်မှုကိုလဲ ခိုင်မြဲစေပါတယ်။
၁၀. ခဏလောက် တူတူမှိန်းနေပါ
ချစ်ဇာတ်လမ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ခင်းပြီးရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးပင်ပန်းနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများက ကိစ္စပြီးရင် မှေးချင် ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖက်ပြီး တစ်ရေးလောက် မှိန်းလိုက်ပါ။ ပြန်နိုးလာရင် နောက်တစ်ချီ ထပ်ဆွဲလို့လဲ ရပါသေးတယ်။
အတှဲတျောတျောမြားမြားဟာ ကိစ်စပွီးတာနဲ့ ဟိုဘကျလှညျ့ အိပျကွတာ မြားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့မပါပါဘူး။ လိငျဆကျဆံ ပွီးပွီးခငျြး အခြိနျလေးဟာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သံယောဇဉျရဈနှောငျဖို့ အကောငျးဆုံး အခြိနျပါပဲ။ သငျက သူမကို ထှေးပှပွေီ့း အိပျဖို့ကလှဲလို့ ဘာမှ မလုပျတတျရငျ လိငျဆကျဆံပွီး လုပျဆောငျသငျ့တဲ့ ရိုမနျတဈဆနျတဲ့ ကိစ်စ ၁၀ မြိုးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လိငျကိစ်စအပွီးမှာ သငျဟာ ဗိုကျဆာနလေောကျပါတယျ။ လိငျကိစ်စဟာ ကိုယျလကျလှုပျရှား လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုလိုမြိုး ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အမွနျစားလို့ရတဲ့ဟာ တဈခုခုလုပျပွီး အိပျယာထဲမှာ ၂ ယောကျသား ထှေးပှရေ့ငျးနဲ့ စားလိုကျပါ။
ကိစ်စပွီးတဲ့အခြိနျမှာ စကားပွောခွငျးဟာ သငျတို့နှဈယောကျကို ပို ပြျောရှငျစပေါတယျ။ အဲဒိခြိနျမှာ စိတျကွညျနတေဲ့အတှကျ အရေးကွီးကိစ်စတှေ ဆှေးနှေးလို့ ကောငျးပါတယျ။ အရမျးကွီးတော့ Serious မဖွဈပါနဲ့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပွောဆိုပါ။
၃. တူတူ အမှတျတရ ပုံလေးတှရေိုကျပါ
ပြျောရှငျမှုရပွီးနောကျမှာ သငျတို့ အမှတျတရပုံလေးတှကေို ရိုကျကွညျ့ပါ။ သငျတို့မှာ သဘာဝပြျောရှငျမှုကနေ မကျြနှာ လငျးနမှောမို့ မိတျကပျတောငျ မလိုပါဘူး။
လိငျကိစ်စအပွီးမှာ အိပျပြျောသှားတတျတဲ့ ပငျြးစရာစုံတှဲ မလုပျပါနဲ့တော့။ ကိစ်စအပွီး အိပျရာထဲမှာ ခဏလောကျ ပှတျသီးပှတျသပျနတောဟာ ရိုမနျတဈ ဆနျလှနျးပါတယျ။ TV ကွညျ့နရေငျးဖွဈဖွဈ စကားပွောရငျးဖွဈဖွဈ မထိတထိလေး ပှတျသီးပှတျသပျနတောဟာ ခဈြဖို့ကောငျးပါတယျ။
ဒါကတော့ ပွောဖို့တောငျလိုမယျ မထငျပါဘူး။ ကိစ်စပွီးရငျ ဖကျပွီး ထှေးပှထေ့ားပေးခွငျးဟာ သငျ့ပါတနာကို သငျဘယျလောကျ မွတျနိုးတယျဆိုတာ ပွရာလဲရောကျပါတယျ။ လူတိုငျးလဲ ကွိုကျပါတယျ။
စိတျခငျြးဆကျသှယျဖို့ နညျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဖကျထားပေးတာ၊ အစာခှံကြှေးတာ၊ စကားပွောတာတို့ပါ။ ဒါပမေယျ့ နှဈယောကျသား မကျြနှာခငျြးဆိုငျလှဲပွီး ဘာမှ မပွောပဲ မကျြလုံးခငျြးဆုံကွညျ့နရေတာကလညျး ခဈြဖို့ကောငျးပါတယျ။ ခဈြစရာ စကားလေးတှလေဲ ပွောပေးနိုငျပါသေးတယျ။
ရယျရတာကို မကွိုကျတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ကောငျလေးတှကေ ဟာသဉာဏျရှိတဲ့ကောငျမလေးတှကေို ကွိုကျတတျတာ သကျသပေါ။ ကိစ်စအပွီးမှာ ရယျစရာ ပွောပေးပွီး အားရပါးရ ရယျလိုကျပါ။ ရယျခွငျးဟာ စိတျခငျြးဆကျသှယျမှုကိုလဲ မွငျ့မားစပေါတယျ။
၈. အနာဂါတျကို ဆှေးနှေးပါ
ဒီကိစ်စနဲ့ ဘာမှတော့ မဆိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့အိပျမကျတှေ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို သူမကို ပွောပွနိုငျပါတယျ။ သငျသှားခငျြတဲ့ နရောတဈခု၊ လုပျလိုတဲ့ အလုပျတဈခုလိုမြိုးပေါ့။ အဲဒါဟာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပိုသိစပွေီး ဆကျသှယျမှု ပိုခိုငျမွဲစပေါတယျ။
၉. ဇာတျကား တဈကားလောကျ ကွညျ့ပါ
ခဈြကိစ်စပွီးတော့ ရုပျရှငျကွညျ့တာ ရိုမနျတဈဆနျပါတယျ။ အလှမျးအဆှေးကားတှရှေောငျပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသကားလေးတှေ ကွညျ့ပါ။ အဲဒါဟာ သငျတို့ကွားက ဆကျသှယျမှုကိုလဲ ခိုငျမွဲစပေါတယျ။
၁၀. ခဏလောကျ တူတူမှိနျးနပေါ
ခဈြဇာတျလမျး ခပျကွမျးကွမျးလေး ခငျးပွီးရငျတော့ သငျတို့နှဈယောကျလုံးပငျပနျးနမှော အသအေခြာပါပဲ။ ယောကျြားလေးတျောတျောမြားမြားက ကိစ်စပွီးရငျ မှေးခငျြ ကွပါတယျ။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဖကျပွီး တဈရေးလောကျ မှိနျးလိုကျပါ။ ပွနျနိုးလာရငျ နောကျတဈခြီ ထပျဆှဲလို့လဲ ရပါသေးတယျ။
Previous: ပြောင်းလဲခြင်း၏ အစ
Next:5+5=5သင်ခန်းစာ